Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Netherlands » Nampiato ny fampiharana COVID-trace ny Netherlands taorian'ny nahitany azy dia manampy an'i Google hanangona angona manokana
Ireo mpampiasa fampiharana dia angon-drakitra tsy miankina voangon'ny programa hafa apetrak'i Google amin'ny alàlan'ny finday Android
Mampiasa ny rafitra Google Apple Exposure Notification (GAEN) ny fampiharana
Ny fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo dia tsy tokony hanana alalana amin'ireo kaody fampiharana
Ny fampiharana CoronaMelder dia tsy handefa fampitandremana momba ny aretina mety hitranga mandritra ny roa andro
Nanambara ny minisiteran'ny fahasalamana, ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fanatanjahantena Netherlands fa sembana ny fampiharana findainy COVID-19 taorian'ny nahitana azy ireo fa angon-drakitra manokana napetrak'ireo programa hafa napetrak'i Google ho an'ny finday Android ny data tsy miankina.
Ny fampiharana CoronaMelder dia tsy handefa fampitandremana momba ny aretina mety hitranga mandritra ny roa andro, hoy ny minisiteran'ny fahasalamana, taorian'ny nahitana ny fivoahan'ny data.
Ny fampiharana dia mampiasa ny Google Rafitra Fampandrenesana Apple Exposure Notification (GAEN) - toy ny fampiharana hafa mitovy amin'izany ampiasaina manerana ny EU. Izy io dia miasa amin'ny alàlan'ny fanovana tsy tapaka ny kaody namboarina kisendrasendra nifanakalo teo anelanelan'ny telefaona mifanakaiky - ary mandefa fampitandremana ho an'ireo izay nifandray tamin'ny olona iray izay nanaporofo fa tsara ny COVID-19.
Ny fampiharana an'ny antoko fahatelo dia tsy tokony hanana fidirana amin'ireo kaody ireo. Na izany aza, hita fa tsy izany no izy tamin'ny telefaona Android, ary ny apps napetraka aorin'izany dia afaka mamaky ny angon-drakitra.
Tao anaty fanambarana iray dia nilaza ny governemanta fa 'fanitsakitsahana ny lalàna vonjimaika amin'ny fangatahana fampandrenesana [ho an'ny] COVID-19.' Ny fanitsakitsahana voalohany dia hitan'ny tambajotra eHealth eraky ny EU ary nitatitra tany Holandy ny 22 aprily. Nisy ny fanadihadiana natomboka taoriana kelin'izay, nahatonga ny minisitry ny fahasalamana Hugo de Jonge hampiato vonjimaika ilay fampiharana, na dia nilaza aza i Google fa nanamboatra ny olana.
Na izany aza, tsy maka fotoana ny governemanta, na izany aza, misafidy ny hamaha ny olana alohan'ny hamelana ny fampiharana hiasa indray. Hampiasa ny roa andro "hamotopotorana raha toa ka nanamboatra ny famoahana ny Google", novakiana ny fanambaran'ny minisitera.
Araka ny Google, ny olana dia mitoetra ao amin'ny 'identifier Bluetooth sendra ampiasain'ny framework Exposure Notification' izay 'azo idirana vonjimaika amina fampiharana voafetra napetraka mialoha.' Nilaza ihany koa izy fa ny angon-drakitra nomen'ny mpamaritra 'azy manokana dia tsy misy lanjany azo ampiharina amin'ireo mpisehatra ratsy,' ary nampiany fa ny mpamorona ny fampiharana ny antoko fahatelo dia toa tsy nahalala ny fisian'ny data.
Google dia nampanantena ihany koa fa ny vahaolana dia 'ho azon'ny mpampiasa Android rehetra amin'ny andro ho avy.' Ny rindrambaiko holandey dia efa navoakan'ny olona 4,810,591 hatramin'ny 27 aprily, araka ny tranonkalany.